Ilhaan Cumar oo ka hortimid qorsho uu Mareykanka ku musaafurinayo Soomaali farabadan | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Ilhaan Cumar oo ka hortimid qorsho uu Mareykanka ku musaafurinayo Soomaali farabadan
Ilhaan Cumar oo kamid ah Xildhibaannada Kongareska Mareykanka ayaa si cad uga soo horjeesatay Qorsho ay wadaan laanta Socdaalka Maraykanka ,kaas oo sababi kara in boqolaal Soomaali ah laga soo musaafuriyo gudaha dalkaas.
Dadka la soo celinayo ayaa badankood waxaa ay yihiin Soomaali si sharcidaro ku jooga Maraykanka , kuwaas oo ay macquul tahay in dib loogu soo celiyo dalkooda Soomaaliya.
Xildhibaanad Ilhan ayaa ku dhaleeceysay laanta socdaalka Mareykanka qorshahaas oo ay sabab uga dhigtay arrimo la xiriira Cudurka Safmareenka ah ee Coronavirus.
Qoraal ay soo dhigtay Barteeda Twitter ka ayaa waxaa ay ku sheegtay in qorshaha musaafinta kaliya aysan dhibaato ku aheyn shakhsiyaadkan, balse ay qatar ku yeelan karto Soomaalida , isla markaana ay keeni kart nolol ama geeri.
Mareykanka ayaa waxaa ku sugan Soomaali farabadan oo isugu jira kuwo Sharci heysta iyo kuwo si sharci darro ah ku jooga,waxaana tan iyo markii la doortay Madaxweyne Donald Trump Mareykanka lagas oo celiyay Soomaali farabadan.